Goslings amin'ny sakafo | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Sokajy Goslings amin'ny sakafo
Ny sakafo mahavelona amin'ny goslings amin'ny andro voalohan'ny fiainana
Ny gisary dia ao anatin'ny tsikirikirioka. Ny fikarakarana azy ireo, ary ny fanomanana ny sakafo ara-dalàna dia tsy ho olana lehibe ho anao. Ny volana voalohany amin'ny gaza vao teraka dia manana anjara lehibe eo amin'ny fiainany. Amin'ity fotoana ity, mila mandamina ny fikojakojana sy ny fikarakarana ny zazakely ianao. Toeram-ponenana manokana no mipetraka amin'ny goslings sakafo.
Fomba hanomezana goslings ao an-trano
Ny gisa dia heverina ho malina amin'ny fikarakarana sy ny sakafo. Ny anjara asa manan-danja indrindra amin'ny fandrosoana ara-drariny no volana voalohany amin'ny fiainana. Amin'ity indray mitoraka ity dia ilaina ny mandrindra ny votoatiny, fa koa ny fikarakarana ny zana-kisoa. Tena zava-dehibe tokoa ny maha-avo lenta azy ary mandanjalanja mandrakariva. Ao amin'ity lahatsoratra ity no hianaranao hoe inona no tokony hataon'ny gisary raha vao teraka ka hatramin'ny fahamatorana tanteraka.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Goslings amin'ny sakafo